Semalt Review: Inobatsira MaWebhu Okusvitsa Mazano KweZvasiri Zvidhairi
Kuva munhu asiri teknolojia, unogona kuuya nezvipingamupinyi pakusarudza inobatsira web scraping service. Ichokwadi kuti kune nhamba huru yemapurogiramu paInternet. Vamwe vavo vanotora mashoko kubva pakero keroimeri apo vamwe vanoona zvinyorwa zvemashoko, nzvimbo dzekufambisa, uye nhepfenyuro yemagariro. Zvinyorwa zvinotevera zvekubudiswa kwemashoko zvakanyatsorongedzerwa kune vasiri-coders nevanhu vanoda kumira kure nemitauro mitauro yakadai saC ++ pavanenge vachiita mabasa avo.
Icho chimwe chezvakanakisisa uye zvinobatsira zvikuru webtrapraping services nokuda kwekusina coders. Kukosha kweSpinn3r ndechokuti kunogona kukonzera webhusaiti yako yose uye kubvisa deta kubva kumablogi ega, mararamiro evanhu uye RSS feeds. Inoshandisa Firehose API uye inotarisira zvinodarika 80 muzana zvekutarisa uye kutambaira paInternet. Mukuwedzera, Spinn3r inochengetedza ruzivo rwakabviswa mujomu reJSON uye ine dzimba dzakafanana neGoogle. Iyo inoongorora uye inodzokorora ma datasetti ako maererano nezvose zvaunoda uye inoita tsvakurudzo pane data yakasvibiswa, kukuwana iwe yakakwirira-nhu uye yakanyatsorongwa mashoko nyore nyore.
Octoparse ndeimwe yezvinhu izvi zvinyorwa zvekutsvaga zviri nyore kugadzirisa. Inowanzozivikanwa nekuda kwayo-yakanaka uye inonyanya kushandiswa. Octoparse inoita kuti zvive nyore kwauri kutora data kubva pamapeji akaoma ewebhu uye kutevedzera munhu anoshandisa zvinyorwa kana uchibvisa ruzivo uye unotarisa nzvimbo dzakasiyana nema blogs. Octoparse inokubvumira kuchengetedza data yakabviswa pamakore ayo kana kuikanda pamushini wepanyika.
Fminer ndechimwe chezvinhu zvakanakisisa zvekugadzira mapurogiramu. Inobatanidza nyika-class specifications uye inoita kuti iwe uone chinyararire iwe data yako pairi kuiswa. Zvishoma nezvishoma inoshandisa mashoko kubva kune zvese zviri nyore uye dzakakomba nzvimbo uye hazvidi kuti tive neunyanzvi hwekugadzira zvachose. Kana iwe uine ruzivo rwehuchenjeri, Fminer ndiyo chirongwa chakanaka kwauri.
Ndiyo simba rinowedzera Firefox iwe unogona kuzvitsvaga uye kushandisa seHowFox add-on. Outwit Hub ndechimwe chezvinhu zvakanakisisa uye zvinoshamisa zvikuru zvekushandisa zvidhina. Iko haisi kungounganidza uye kunotsvaga data asiwo kunokamba mapeji akasiyana-siyana, zvichiita kuti zvive nyore kwauri kuti usimudzire marashi yako. Kuva kunze-kwe-bhokisi, chirongwa ichi hachidi chero unyanzvi hwekugadzira uye zviri nyore kushandisa.
6. Websaiti Yakawandisa - A Chrome Extension